I-Tshukudu Bush Lodge - Ese Pilanesberg National Park
I-Tshukudu Bush Lodge
I-Tshukudu Bush Lodge yindawo yokuhlala enomzi wezilwanyana yona ise Sun City, kwaye ifumaneka phezuu kwinduli othi xa ujongile ubone umbono omhle we Pilanesberg National Park.
Ukuhamba ngesithuthi ubuka izilwanyana, noku khangela izilwanyana ezintlanu ezinkulu ezithandwayo zeli
Indawo yokulala engenaso isifo sika malaleveva ekufuphi eSun City
Indawo ezilungele ukubamba imisitho neenkomfa
Iphakathi kwi Pilanesberg National Park egcwele izilwanyana
Indawo iTshukudu Bush Lodge inikeza abatyeleli indawo yokuhlala ese Sun City ekufuphi kwizilwanyana ekumgangatho ophezulu kwihlathi lase Afrika. fumana ithuba lokukhangela ezona zilwanyana zeli ezinkulu – ingonyama, indlovu, ingwenya, imbabala kunye no Mkhombe – ngexesha ukhwele isithuthi ubuka izilwanyana. I-Pilanesberg National Park engenaso isifo sika malaleveva, ikwazingca ngokubanentlobo zentaka ezingapha kwama 360 ezahlukileyo.
Hlala kwindawo ekudidi oluphezulu ngexesha wonwabele ukuphola kwelihlathi lase Afrika. Bona izilwanyana zasendle zeli lase Afrika ngexesha ume kwi balkhoni yakho. Gqibezela usuku lwakho ngokuthi ungene kwibhafu ehonjiswe isi- Afrika. lendawo yokuhlala eSun City inamagumbi anamakhitshi neekamere amathandathu (6) ukuqinisekisa okokuba awuphazanyiswa.
I-Tshukudu Bush Lodge ikwindawo ekufutshane kamnandi eSun City. Ndwendwela kwindawo yokungcakaza okanye ubukele enye yemidlalo yeqonga. Lendawo yokuhlala ikufuphi eSun City ilungele imisitho kunye neenkomfa. Izixhobo ziquka iprojekha ehla phezulu, enesibuko esiphathekayo, amaphepha amakhulu okubhala, umabonakude, i-VCR, kunye ne projektha efakwe phezulu.